China Broken Bridge aluminium window yoMvelisi kunye noMthengisi | UMijiang
1. Ibhulorho eyaphukileyo ye-aluminium ine-insulation efanelekileyo ye-thermal. Iifreyimu zangaphakathi nezangaphandle zephrofayili yokugquma ubushushu zidityaniswe nokuthamba. Isakhelo sitywinwe ngokuqinileyo ngomtya omnye werabha kunye nemicu emibini yoboya. Inokuxinana komoya okugqwesileyo kunye nokuxinana kwamanzi kunye nokusebenza kokugcina ubushushu. Ifestile yefestile yamkela ukwakheka kweglasi, okwenza ukuba iwindow ibonise isandi esigqibeleleyo sokugquma, ukufudumeza ubushushu, ukugcina ubushushu kunye nomsebenzi, ukugcina iindleko zokufudumeza kunye nokupholisa.Ixabiso lomlingani wobushushu K lingaphantsi kwe-2.23-2.94w / m2 · K Impembelelo yokonga umbane iyamangalisa, kwaye iindleko zokonga umbane kwiminyaka eliqela zanele ukwenza utyalo-mali lwangaphambili.
3.Ukuncitshiswa kokuchasana nokubanda kwebhulorho eyaphukileyo ialuminiyam. Ibhulorho eyaphula iprofayili yealuminiyam inokuqonda indlela ezintathu zokutywina iingcango kunye neefestile, zahlula ngokufanelekileyo igumbi elinomphunga wamanzi, liqonde ngempumelelo ibhalansi yamanzi yegesi, iphucula kakhulu ukuqina kwamanzi kunye nokuxinana komoya kweengcango kunye neefestile, kunye nokufezekisa isiphumo Iifestile ezicocekileyo neziqaqambileyo.
4. Uyilo lwefestile yeengcongconi echasene nebhulorho eyaphukileyo. Iwindow engabonakaliyo yesikrini inokufakwa kwaye isetyenziswe ngaphakathi nangaphandle. Inesiphumo sengcongconi yokulwa kunye nokubhabha.
5.Ubusela obuchasene ne-anti kunye ne-anti loosing device yebhulorho eyaphula i-aluminium. Ukuxhotyiswa ngesitshixo esikhethekileyo esinamanqaku amaninzi sokuqinisekisa uzinzo kunye nokhuseleko lweefestile ezisetyenziswayo.
Ibhulorho eyaphula ialuminiyam inentsebenzo elungileyo yokugquma .. Isakhiwo sayo siyilwe ngocoselelo kwaye amalungu aqinile. Iziphumo zovavanyo zibonisa ukuba ukufakwa kwesandi somoya kufikelela kwi-30-40db, enokuqinisekisa ukuba abahlali abaphakathi kweemitha ezingama-50 kumacala omabini endlela abaphazanyiswanga yingxolo, kwaye idolophu engqonge idolophu inokuqinisekisa ukuba ngaphakathi kuthule kwaye kushushu.
Egqithileyo Umnyango weCPL
Okulandelayo: Ifestile yeCasement